हावाको माध्यमवाट फैलदैछ ओमिक्रोन ? यो विषयले बढायो वैज्ञानिकहरुको चिन्ता – List Khabar
Home / समाचार / हावाको माध्यमवाट फैलदैछ ओमिक्रोन ? यो विषयले बढायो वैज्ञानिकहरुको चिन्ता
admin December 8, 2021 समाचार Leaveacomment 173 Views
एजेन्सी । यो अध्ययन हङकङको क्वारेन्टाइन होटलको सीसीटीभी फुटेजमा आधारित छ। यो अध्ययन ‘इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिज’ जर्नलमा प्रकाशित भएको छ । अध्ययनले हङकङको क्वारेन्टाइन होटलमा बसेका दुईजना यात्रुले होटलको करिडोरमा ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलाएको पाइएको छ।
विशेष कुरा के हो भने यी दुबै यात्रुले खोपको दुबै डोज लिएका थिए र होटलमा बस्दा पनि कसैको सम्पर्कमा आएका थिएनन् । यी दुई आ आफ्नो कोठाबाट बाहिर निस्किएनन् र भेट्न पनि आएनन् । उनको कोठाको ढोका खाना लिन वा कोभिड परीक्षणका लागि मात्र खुल्ने गर्दथ्यो ।
यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरु संक्रमित भए र होटलका अन्य भागमा पनि संक्रमण फैलाए । यही कारणले गर्दा यो भेरियन्ट हावाको माध्यमवाद पनि फैलन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
केही दिन अघि, दक्षिण अफ्रिकाका वैज्ञानिकहरूले ओमिक्रोन भेरियन्टमा प्राकृतिक प्रतिरक्षाबाट बच्ने क्षमता रहेको बताएका थिए। कोरोनाको यो भेरियन्ट पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा फेला परेको थियो ।
रोमको बाम्बिनो गेसु अस्पतालले तयार पारेको र प्रकाशित गरेको ओमिक्रोन भेरियन्टको पहिलो तस्बिर अनुसार, ओमिक्रोन भेरियन्टमा डेल्टा भन्दा धेरै उत्परिवर्तनहरू छन्, विशेष गरी मानव कोषहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने प्रोटीनको अंशमा। अन्वेषकहरूका अनुसार, यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू धेरै खतरनाक छन्, केवल यो कि भाइरस अर्को संस्करण सिर्जना गरेर मानव प्रजातिमा अधिक अनुकूल भएको छ।
डब्ल्यूएचओका करिब ४५० वैज्ञानिकहरूले ओमिक्रोन भेरियन्टमा यो खोप प्रभावकारी छ कि छैन र यो विश्वभर कुन तहमा फैलिन सक्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन थालेका छन्। आशा छ वैज्ञानिकहरूले यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ चाँडै पाउनेछन्। उही समयमा, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भन्छन् कि देश कोभिड(१९ संक्रमणको चौथो लहरमा प्रवेश गर्दा मानिसहरूका लागि अस्पतालहरू फेरि एक पटक तयार भइरहेको छ।
Previous अ‍ाेमिक्राेनलाई अहिले प्याेगमा अ‍ाएकै खाेपले काम गर्छ: डब्लूएचओ
Next जंगलमा बम भेटिएपछि बम डिस्पोजल टोली बोलाइयो, जाँच गर्दा सुरक्षाकर्मी लाजले भुतुक्कै